Wasiir Rooble oo u jawaabay Somaliland, shaaciyeyna sida Xajka loo qeybiyey sanadkan - Caasimada Online
Home Warar Wasiir Rooble oo u jawaabay Somaliland, shaaciyeyna sida Xajka loo qeybiyey sanadkan
Wasiir Rooble oo u jawaabay Somaliland, shaaciyeyna sida Xajka loo qeybiyey sanadkan
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Diinta iyo Awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya, Cumar Cali Rooble ayaa faah faahin ka bixiyay qaabka ay u qaybiyeen tirada Xujeyda ee sanadkan Somaliya loo ogolaaday.
Soomaaliya ayaa sanadkan la siiyay tiro dhan shan kun iyo laba boqol (5,200), halka sanadkii horena la siiyay kow iyo toban kun iyo shan boqol (11,500).
Somaliland ayaa daba-yaaqadii bishii hore ee May waxa ay cabasho ka muujisay qaabka ay wasaaraddu u qaybisay tirada Xujeyda, oo sida ay ku andacootay ay tiro yar kaga soo aaday.
Cumar Cali Rooble, Wasiirka Diinta iyo Awqaafta ee Dowladda Federaalka ayaa sheegay inaysan iyagu waxba ku qaybin qaab qabiil iyo mid Dowlad Goboleed toona, balse ay wax ku qaybiyeen shuruudihii ay dejiyeen shirkadihii soo buuxiyay oo keliya.
“Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed ee Muslimiinta ah ee Xajka dooneysa inaan u caddeeyo Xajka laguma qaybin qabiil, deegaan ama Maamul Goboleed ee waxaa lagu qaybiyay sharikaad, oo ah yaa ka bixi karo arrintan oo horey uga shaqayn jiray oo Xaajiga Soomaaliyeed dhibaatada haysa iyo culeyska ku haystaa wadankaasi oo ka warqabno dal ajnabi ah oo aysan aqoon u lahayn, oo luqadiisa iyo deegaankiisa aysan aqoonin, yaa baahi tiri kara. Shuruudahaa ciddii soo buuxisay uun baa laga qaatay,” ayuu yiri Wasiirku.
Wasiirka ayaa yiri “Waan arkayay in la siyaasadeeyay, waan arkayay in la qabyaaladeeyay, waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed qabiil laguma qaadanin, lagumana qaybinin. Xajka waa tiirkii 5aad ee Islaamka, cid qabiil lagu siiyayna ma jirto.”
Wasiir Rooble ayaa hadalkiisa ku xoojiyay “Xajkan, guddi Soomaaliyeed oo wasaaradda dhexdeeda oo khubaro ah ayaa loo qabtay, shuruudo ayay dejiyeen, shuruudahaa ciddii ka soo baxday ayay magaca sharikaadka ku siiyeen. Qabiil wax la yiraahdo waxba laguma qaybin, qabiil walaa Maamul Goboleed wax lagu qaybiyay ma jiraan. Guddigaa howshaan iska leh, asaga ayaana maamulayay, haddaad tiraahdo Maamul Goboleed halagu qaybiyana, waa iska dareemi kartaa dhibaatada intaan ayay ka sii badan laheyd.”